Dacwad ka dhan ah dowladda Soomaaliya oo loo gudbiyay maxkamadda dambiyada ee ICC | allsanaag
23rd October 2021 admin Category :
Ururka ay ku mideysaniyiin qareennada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah oo fadhigiisu yahay magaalada Melbourne ee waddanka Australia ayaa dacwac ka dhan ah dowladda Soomaaliya u gudbiyay maxkamada caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC ee magaalada The Hague.
Wariyaha VOA ee dalka Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa dacwadan ka wareystay guddoomiyaha ururkaasi Garyaqaan Yuusuf Cabdi Faarax, ugu horeyna waxa uu weydiiyey dacwaddan ay gudbiyeen waxa ay ku saabsaneyd.
Ururka ay ku mideysaniyiin qareennada Soomaaliyeed ee qurba joogta ah oo fadhigiisu yahay magaalada Melbourne ee waddanka Australia ayaa dacwac ka dhan ah dowladda Soomaaliya u gudbiyay maxkamada caalamiga ee dambiyada dagaalka ee ICC ee magaalada The Hague. Wariyaha VOA ee dalka Australia Ibraahim Cumar Baafo ayaa dacwadan ka wareystay guddoomiyaha ururkaasi Garyaqaan Yuusuf Cabdi Faarax, ugu horeyna waxa uu weydiiyey dacwaddan ay gudbiyeen waxa ay ku saabsaneyd.
← Buuq uma baahnin Ciidankii Ina Diyaano →